Ivesmamoğlu Nanome ny Filazantsaran'ny fitaterana an-dranomasina ho an'ny olona Kartal | RayHaber | raillynews
[27 / 01 / 2020] Hisokatra ho an'ny fitateram-bahoaka mandritra ny 24 ora ny lanjan'ny Bosporus Istanbul	34 Istanbul
[27 / 01 / 2020] 'Atrik'asa fanamboarana' Railsa Rail 'izay notazonina tao amin'ny BTSO	16 Bursa
[27 / 01 / 2020] 2020 Vidin'ny tapakila fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony amin'ny vidin'ny famandrihana YHT isam-bolana	Ankara 06
[27 / 01 / 2020] Ateraky ny seranam-piaramanidina Istanbul no nahomby ny lasibatra mpandeha tamin'ilay taom-piasana voalohany	34 Istanbul
[27 / 01 / 2020] Loza Pothole ao Ankara Linezmir YHT Line! Tokony ho raisina ny fitandremana	Ankara 06
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulGmamoğlu Nahazo ny Vaovao Momba ny fitaterana ranomasina ho an'ny olona Kartal
04 / 12 / 2019 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Ny voroma Imamoglu dia nanome ny vaovao tsara momba ny fitaterana an-dranomasina
Ekrem Imamoglu, Ben'ny tanàna ao amin'ny Distrikan'ny Istanbul Metropolitan, dia nanao ny 12 an'i Kartal nandritra ny fitsidihany ireo monisipaly monisipaly. Imamoglu, taorian'ny fitsidihana ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny olan'ny fitaterana any Istanbul, “ny olana momba ny fifamoivoizana ao Istanbul dia manana olana maro, ny mpitolona dia betsaka. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny olom-pirenena ity olana ity. Mazava ho azy fa tiantsika ny hampiditra ny fitaterana an-dranomasina nohavaozina amin'ny fomba mahomby indrindra. Istanbul dia manana ampahany kely amin'ny fitaterana an-dranomasina. Mampitombo izany isika. Amin'izany lafiny izany, ny 11 dia manana "atrikasa an-dranomasina" amin'ny volana Desambra. Amin'izay izahay dia hanana 'atrikasa fitaterana'. Ho lasa fivoriana midadasika sy azo antoka. Fa misy tranga iray: ny ampahany lehibe amin'izany dia ny metro. Ny fampiasam-bola ilaina lehibe dia ny metro ”.
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'ny Istanbul Metropolitan Mun IM (IMM), dia nitsidika ny kaominina 12 ao Kartal. Imamoglu, fitsidihana munisipaly Kartal, ny ben'ny tanàna Gokhan Yuksel, dia noraisin'ny mpiasa sy ny olom-pirenena. Nizara fanomezana an'i Imamoglu ny olompirenena, voninkazo ary Istanbul, avy eo nankany amin'ny biraon'i Yüksel. Yüksel dia nisaotra an'i İmamoğlu tamin'ny fitsidihana nataony.
"NY SEAN TRANSPORTATION INDRINDRA INDRINDRA"
Ny olana voalohany nandritra ny fitsidihana izay nitranga tamin'ny fanombohan'ny ora fiasana, dia ny fitaterana. Imamoglu dia nanambara fa nahatratra 1 ora 15 minitra an-dranomasina avy ao Kartal mankany Kartal izy ireo ary nilaza, Bir amin'ny fotoana tsara 1 dia minitra 15. Raha manankarena sy mampitombo ireo isa-bolongana isika dia maro ny sambo azo ampiasaina any Istanbul. 11 Manana 'atrikasa an-dranomasina' isika ny volana Desambra. Amin'izay izahay dia hanana 'atrikasa fitaterana'. Te hitondra ny ranomasina izahay. Any amoron-tsiraka Beylikdüzü, morontsiraka Kartal, Tuzla Shipyard dia nanao ISTAC tamin'ny sambo 1 ora 15 minitra afaka tonga izahay. Noho izany, ny fidirana amoron-dranomasina any Istanbul dia ho tena zava-dehibe amin'ny dingana ho avy; fa tsy miankina fa ny fitateram-bahoaka. Mazava ho azy fa faritra izay mila fanampiana; fantatsika izany. Vokatr'izany dia misy koa ny fanampiana ara-bola manerana ny fitaterana. Raha afaka mitazona anjara any amin'ny ranomasina isika, zava-dehibe ihany koa izany ho an'ny fiadanan'i Istanbul. Satria tontolo mahafinaritra sy milamina kokoa ny fitaterana ranomasina. Te hanatsara izahay. ”
"HITANAO NY FIVAVAHANA 39"
Ny fomba fijerin'i Imamoglu momba ny fitsidihany an'i Kartal dia toy izao manaraka izao: “Ao Kartal izahay izao. Ny distrika 12 ataontsika dia mitsidika izany. Manantena aho fa te hamita haingana araka izay azo atao izahay; fa ny fandaharam-potoanantsika dia mahatonga ny fitsidihan'ny fitsidihana kely fotsiny. Nametraka ny faran'ny taona izahay, saingy ho sahirana izahay. Izahay mitsidika ny kaominina rehetra. Mitsidika ny 39 izahay. Manao fanapahan-kevitra an-tserasera izahay miaraka amin'ny distrika. Miaraka amin'ny famaritan'ny Ben'ny tanàna Kartal antsika an'i Kartal amin'ny masony, ahoana no ahafahantsika mamorona orinasa miaraka amin'ny IMM, inona ny fampiasam-bola omen'ny IMM eto, inona no tokony ho laharam-pahamehany fa ny fitsidihantsika ny distrika miaraka amin'ilay fandaharam-potoana mitovy. Izahay dia hanao tombana miaraka amin'ity lohahevitra ity. Maniry aho ny andro fiasana mahomby ho an'i Kartal hanangana dingana tena mahomby amin'ny IMM. ”
Taorian'ilay lahateny dia nandefa fivoriana iraisan'ny latabatra ny solontena IMM sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Kartal Munisipaly.
“AZO ATSORATRA INDRINDRA”
Taorian'ny fihaonana dia niresaka ny olana momba ny Distrika Kartal, namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety i İmamoğlu. Imamoglu, ny fanontaniana momba ny zavatra nodinihina tamin'ny fihaonana momba ny fitaterana Istanbul, "Ny olana mifehy ny fifamoivoizana ao Istanbul dia manana olana maro; ny mpitolona dia betsaka; metro, metrobus, mpandeha an-tongotra, bisikileta, fitaterana an-dranomasina, minibus, fiarakaretsaka, misy ny olana marobe ... Tokony hodinihina tanteraka ity resaka ity, raha tokony ho iarahan'ireo mponina any Istanbul ny raharaha. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny olom-pirenena ity olana ity. Samy hanana andrim-panjakana mifandraika amin’izany ny IMM ary ny olom-pirenena no hiara-miasa amin’izany. Voalohany indrindra aloha, ny olom-pirenena dia hahalala tsara ny fizotrany. Mazava ho azy fa tiantsika ny hampiditra ny fitaterana an-dranomasina nohavaozina amin'ny fomba mahomby indrindra. Istanbul dia manana ampahany kely amin'ny fitaterana an-dranomasina. Mampitombo izany isika. Amin'izany lafiny izany, ny 11 dia manana "atrikasa an-dranomasina" amin'ny volana Desambra. Eto isika dia hiresaka, miaraka amin'ireo mpandray anjara an-dranomasina, 'Ahoana ny hanatsarana'? Amin'izay izahay dia hanana 'atrikasa fitaterana'. Ho lasa fivoriana midadasika sy azo antoka. Raha ny marina dia handeha amin'ny lalana isika amin'ny alàlan'ny fametrahana lasibatra eo anoloantsika amin'ny endrika drafitra master amin'ny fitaterana an'i Istanbul. Fa misy tranga iray: ny ampahany lehibe indrindra amin'ity metro ity dia ny metro. Ny fampiasam-bola tsy maintsy ilaina dia ny metro ”.
Am After Kaynarca, nisy ny lalana fitaterana izay misy an'i Sabiha Gökçen. Ahoana ny drafitra ho azy? Rahoviana no hanomboka ny fananganana? Amin'izao fotoana izao dia misy zoro metro izay mijanona; firy ireo sisa tavela ary inona ny toe-javatra misy azy ireo? Nanomboka ve ny fandinihana sa mijoro ho toy ny takelaka famantarana izany? Namaly ity fanontaniana ity i İmamoğlu:
"NY FAHANOTANANA ARY TEKNIKO ARIKA
"Efa nilaza izahay fa nijanona ny andalana 8. Tao anatin'ireo andalana ireo dia mazava ho azy fa malefaka; fa ny tsipika tender dia tsy misy antsipirian'ny tetikasa. Misy olana toa an'io. oh Ny tsipika Mahmutbey-Esenyurt dia tena manelingelina ny antsipirihany. Tsy mijery ny tsipika malefaka fotsiny ireo namako, fa ny dingana manontolo. Asa haingana be dia be no vita ary ny sasany tsy nanana andrana fandehanana. Tuzla-Pendik-Kaynarca, ny trosa izay voalaza ao amin'ny fizarana momba ny tsipika ny asany. Fanitsiana kely no mitranga, saingy nanomboka teo ny dingana. Tsy ho ela dia ho eo isika miaraka amin'ny dingana toy ny fametrahana fototra, fanombohana, fomba hitenenana. Mitohy ny ezaka ara-bola sy ara-teknika mifandray amin'ny andalana hafa. Manana olana hafa koa izahay. Tsy voafetra ny tsipika 8. Manana filàna tsipika hafa izahay amin'ny ho avy any Istanbul. Ohatra, faritra iray izay tsy miraharaha mankany amin'ny lafiny iray i Beylikdüzü. Tena olana lehibe amin'ny zotram-piaraha-miasa izy io. Satria ny olona 2-2,5 tapitrisa ao amin'io faritra io dia tsy manana fifandraisana metro amin'izao fotoana izao. Na ny fifandraisana aminy miaraka amin'ny Istanbul aza dia metrobus. Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny fihanaky ny metrobus dia ny hoe faritra dia lavitra ny rafitry ny lalamby. Amin'ny fampidirana ireo olana rehetra ireo, ilaina ny miantoka fa manomboka ity andiany 8 ity dia manomboka amin'ny fanavaozana ny tetikasa sasantsasany amin'ny fomba mahomby indrindra, ary ny fandrefesana tetikasa vaovao mila manomboka amin'ny haingana sy tena maika amin'ny dingana manaraka, amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny tetikasa eto ary amin'ny fanomezana ny famatsiam-bola ho an'ny tetikasa. , mikasa ny manomboka ny dingana. Ka raha fintinina: Amin'ny taona ho avy 4 dia te-hamita ireto, ary manomboka manomboka kilaometatra lehibe izay tena mahomby, tena mahomby. Ambonin'izany, ny atrikasa ataontsika dia hanome antsika izao valiny izao. Ny tanjonay dia ny hizara ny XJUMX projection hoavy amin'ny mponin'i Istanbul amin'ny volana Janoary farany. ”
"MAMPIASA ISIKA ISIKA REHETRA ARAKA FIVORIANA"
Hoy i İmamoğlu, Esenyurt Ny volavitan'ny metro metro Esenyurt-Mahmutbey dia manana sanda kely eo amin'ny 3 miliara. Raha tsy misy ny antsipiriany momba ny tetikasa, ahoana no nahatonga an'io vola io? Ise Ny fanontaniana dia hoe, "Mazava ho azy fa ny antsipirian'ny tetikasa. Famolavolana kilometatra io. Mitsahatra amin'ny vidiny. Voadinika daholo izy rehetra. Ka ny fizahana dia voadinika ihany koa. Mazava ho azy fa ny endrika fandrafetana ihany koa ny fizahana, fa 'nanomboka izahay androany. Manana tetikasa feno izahay. Ny faran'ilay tsipika dia azo antoka, ny toeram-piantsenana koa dia azo antoka fa 'tsy tranga izay andalana. Andao lazaina mazava tsara io. Raha tsy dia maimaika loatra izany dia tsy ho nahahaona ny tsipika 8. Vetivety dia tsy namboarina tsara, tsy natao ny famakafakana, ary tsy natao araka ny tokony ho izy ny fandefasana ny fandefasana; noho izany, tsy misy famatsiam-bola ary niaina ny zava-misy ankehitriny. Manana namana mahay be anefa isika. Izahay dia manao ady mafy sy haingana amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo orinasa izay nomena ny maintso, mampiditra azy ireo amin'ny fizotrany, mametraka ny traikefany amin'ny orinasa ary hanafoana ny tsy fahampiana hitan'izy ireo ”.
Imamoglu, mpanao gazety taorian'ny famaliana ny fanontaniana niaraka tamin'i Yüksel, Kartal, ny fanadihadiana tany an-tsaha. Imamoglu, izay nanao fanadihadiana voalohany tao amin'ny Kianjan Kartal, "Mitomany ity toerana ity", dia nanome torolàlana hanafainganana ny asa ao amin'ny faritra.
Metro Ready, Kartal-Kadıköy 29-minitra, Kartal-Üsküdar 35 minitra
Amin'ny fanokafana ny Metro Kadıköy-Kartal, Kartal-Taksim dia ho 55 Minutes
Fampandrosoana ny ranomasina ny metro metro Kadikoy-Kartal
Misy tonta Kartal-Gebze ao amin'ny tetikasa metro Kadıköy-Kartal?
Havaray sy Kartal-Kaynarca dia hampitsoka ny vidin'ny faritra Kartal
Ekrem Imamoglu, nanome torolàlana ho an'ny fihenam-bidy
Ny filoha İmamoğlu dia manome 'Vaovao Vaovao momba ny fitaterana 24' mankany Istanbulites
Mpikambana ao amin'ny Parlemanta Kinay no manome vaovao tsara Kütahya Vaovao tsara
Ny minisitra Yıldırım dia nanome ny vaovao tsara momba ny fiarandalamby
Recep Altepe dia nanome baiko ny bala mankany Bursali alohan'ny fety (Özel Haber)
Ny Governor no nanome an'i Toprak Torbalı Vaovao tsara ho any Izban sy Metropolis
Fitaterana ranomasina ao Istanbul
Nijanona tao Istanbul ny tsipika Metro
Olana fitaterana an'i Istanbul
Tetikasa metro Beylikdüzü
Ny fitaterana ranomasina Kartal
Hisokatra ho an'ny fitateram-bahoaka mandritra ny 24 ora ny lanjan'ny Bosporus Istanbul
'Atrik'asa fanamboarana' Railsa Rail 'izay notazonina tao amin'ny BTSO
Facilitiesambaşı Zavamaniry lasa toerana ankafizin'ny fialan-tsasatra
Fidirana maimaimpoana amin'ny faritry ny horohorontany avy amin'i Samsun!
Ny filoham-pirenena Büyükkılıç dia mila hotely iray any Erciyes na afovoan-tanàna
Loza Pothole ao Ankara Linezmir YHT Line! Tokony ho raisina ny fitandremana
Antalya seranam-piaramanidina mampitombo ny fanafoanana ban
Fampahafantarana momba ny tolotra: Kabina Fiarovana Fiarovana azo vidiana
Janoary 30 @ 14: 00 - 15: 00
Fampandrenesana Tender: Asa Ankaray Plant Journal Fanamboarana fandriana sy fanamboarana ny asa fanompoana
Janoary 30 @ 15: 00 - 15: 30
Ny talen'ny sekretera jeneralin'ny fananganana dia handray mpiasa maharitra
Miakatra ao amin'ny Zki Ski Center ny atleta Nasionaly ho avy
Festivalambaşı Snow festival nofoanana
Ny olona rehetra dia nirohotra nankany Carztepe Cable Car
Mersin Metro Hampidinina ny tanàna izay hanimba ny tanàna
TÜVASAŞ Mitohy amin'ny làlamby fiaran-dalamby 7/24
Megane Sedan Janoary 2020 Prices
Nomena loka koa ny lehiben'ny mpamorona Hyundai
Tiorkia an-tokantrano Car ho ao foana Internet